Milatariga Niger oo dilay 14 shacab ah oo ay Boko Xaraam ku khaldeen - BBC News Somali
Milatariga Niger oo dilay 14 shacab ah oo ay Boko Xaraam ku khaldeen
Milatariga dalka Niger ayaa si kama ah u dilay 14 ruux oo shacab ah oo ku sugnaa dhulka durugsan ee koonfur-galbeed iyaga oo ku khalday in ay yihiin kooxda jihaad doonka ah ee Boko Haram, sida ay saraakiishu sheegeen.
Dadka dhintay oo aan midkoodna hubaysnayn ayaa ahaa beeralay ku sugnaa dhul dhaqadhaqaaqa dadka aad looga xakameeyay oo ku dhaw tuulada Abadam oo ku taalla xadka Nigeria.
Labo ruux oo dadkaas ka mid ah ayaa u dhashay Niger halka inta kalana ay ka aahaayeen dad Nigerian ah. Ma cadda faahfaahinta ku saabsan sida hawlgalkaasi u dhacay iyo sababta ay shacabku u joogeen goobtaas.
Boko Xaraam ayuu saldhigoodu yahay Nigeria laakiin waxay hawlgallo ka fuliyaan meelo xadka Nigeria ka baxsan.
Kumannaan dad ah ayaa ka barakacay gobolka Diffa ee koonfurta-galbeed shacabka ayaana laga mamnuucay goobo badan.
Dhoofka dameeraha oo laga mamnuucay Niger
'Musuqmaasuqa milatariga Nigeria oo wiiqay dagaalka ka dhanka ah Boko Xaraam'
QM oo ka digtay carruurta Boko Xaram ee is-qarxiya
Si kastaba ha ahaatee weriyeyaashu waxay sheegayaan in dad badan ay halkaas ku laabteen si ay u ilaashadaan dalagooda.
Waxaa soo baxaya warar is khilaafsan oo ku saabsan hawlgalka milatariga. Wakaaladda Wararka ee AFP waxay sheegtay in duqaymo dhanka cirka ah lagu dilay dadkaas markii ay dib u laabteen si ay dalagooda u soo fiiriyaan. Laakiin Wakaaladda Wararka Reuters ayaa sheegtay in ay askar roondo ku jirta ay rasaas ku fureen dadkaas.